सम्पादकीय : भट्टराईमाथिको दुव्र्यवहार, अराजकताको पराकाष्ठ ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सम्पादकीय : भट्टराईमाथिको दुव्र्यवहार, अराजकताको पराकाष्ठ !
भदौ २९ गते, २०७६ - १७:३२
काठमाडौं । अहिले नेपाली मिडिया जगत र सामाजिक सञ्जाल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको विषयले तातिएको छ । मन्त्री भट्टराईमाथि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा सार्वजनिक रुपमा गरिएको दुव्र्यवहारको विषय बारे मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा बहस चलेको हो । मन्त्री भट्टराईमाथि दुव्र्यवहार गरिएको भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाईरल बनेको छ ।
भिडियोमा केहि अराजक शैलीका व्यक्तिले मन्त्रीमाथि विना प्रसङ्गका प्रश्नहरु तेर्साउँदै दुव्यर्वहार गरेका छन् । १०/१२ जनाको समुहले अराजक र असभ्य ढंगले मन्त्रीलाई गाली गरेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
भिडियोमा मन्त्री भट्टराईलाई भनिएको छ, ‘बुद्धिमा अलिकति बिर्को आओस् मन्त्री ज्यू ! पञ्चायतमा यस्तो हुँदैनथ्यो । बहुदलमा यस्तो हुन्न भन्ने थियो । हाम्रो विश्वासलाई धिक्कार छ ।’ अगाडि भनिएको छ, ‘मन्त्रीको संस्कारै छैन् ।’ भिडियो बनाउँदै गरेका व्यक्तिले आफुँहरुले मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण मागेको तर नपाएको टिप्पणी गर्छन् ।
प्रश्नकर्ताले मन्त्रीलाई एक घण्टासम्म मोजमस्तीमा बसेर प्लेन रोक्ने भनि प्रश्न तेर्साएका छन् । अराजक समुहले मन्त्रीमाथि बर्गल्ती प्रश्नहरु गर्दै अपमानित व्यवहार गरिरहँदा मन्त्री भट्टराई भने नबोली हेरिरहेका हुन्छन् ।
जानकारीअनुसार मन्त्री भट्टराईमाथि उक्त समुहले रनवेदेखि नै दुव्यर्वहार गरेका थिए । ती समुहले गरेको दुव्यर्वहारको सबै विस्तृतिकरण भिडियोमा छैन ।
भट्टराईको शालिन स्पष्टीकरण
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आफुँलाई गरिएको दुव्यर्वहार र आफ्नो कमजोरी बारे सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तृतमा बताएका छन् । उनले आफ्नो कारण यात्रुहरुमा परेको असुविधाप्रति पनि क्षमता मागेका छन् ।
मन्त्रि भट्टराईले आइतबारको कार्यतालिका मिलाउनको लागि बाध्य अवस्थामा नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म आउने बुद्ध एयरको अन्तिम उडानलाई १५ मिनेट मात्रै ढिलो गराएको बताएका छन् । मन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कार्यक्रम ढिला भएको कारण बुद्ध एयरसँग अनुरोध गरेर नेपालगंजको अन्तिम उडानबाट काठमान्डौ फर्कनेक्रममा केहि ढिला हुन गएको सत्य हो । सबै यात्रुको बोर्डिङ भएको करिब १५ मिनेटमा हाम्रो टिमको बोर्डिङ भएको हो । भोली प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जबाफ दिने कार्यक्रम रहेको कारण काठमान्डौ फर्कनै पर्ने दबाबमा म थिए ।’
उनले प्रश्नकर्ताको सबै कुरा ठिक भएपनि पारसविरुद्धको हस्ताक्षरको कुरा निकालेपछि नियत प्रष्टीएको उल्लेख गरेका छन् । ‘पारसका बिरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैँले हामीलाई कति दु:ख दिएको छस् ! त्यो हामीले कहाँ बिर्सेंका छौ र ! सम्म भने । त्यो सुने पछि उनीहरुको नियत मैले बुझिहाले ।’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
यस्तो थियो वास्तविकता
मन्त्री भट्टराई कैलालीको टीकापुरमा भएको एक महोत्सवमा भाग लिन शनिबार कैलाली पुगेका थिए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न पुगेका भट्टराईलाई आयोजकले ढिलाई गर्दा विमानस्थल आउन १० मिनेटमात्रै ढिला हुनपुग्यो । जुन विषय मन्त्री भट्टराईले पनि स्वीकार गरेका छन् ।
आईतबार संसदमा जवाफ दिने कार्यक्रमका कारण मन्त्री काठमाडौं नै फर्कनुपर्ने दबाबमा थिए । जसको लागि उनले बुद्ध एयरलाई अनुरोध गरेर वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।
विमानस्थल स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार बेलुका विमानको उडान समय ६:४८ थियो । जुन समयमा मन्त्रीसहितको टोली विमानस्थल भित्र थियो तर बोडिङ्गको प्रक्रियामा थियो । जसको कारण १० मिनेट अर्थात् ६:५८ मा भट्टराईको टोली जहाजमा पुगेको थियो । मन्त्रीका कारण विमानको उडानमा जम्मा १० मिनेट ढिलो भएको प्रष्ट हुन्छ ।
को थिए मन्त्रीमाथि दुव्यर्वहार गर्ने समुह ?
मन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुँलाई दुव्यर्वहार गर्दै गर्दा ति समुहले पारसविरुद्धको हस्ताक्षरको विषय उठाएको उल्लेख गरेका छन् । आफुँले पारसविरुद्धको हस्ताक्षर उठाउँदा तिनिहरुले समस्या भोगेको कुरा बताएको उल्लेख गरेका छन् । भिडियोमा पनि प्रष्टै पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थाको कुरा गर्दै मन्त्रीलाई गालीगलौज गरिएको छ ।
मन्त्री भट्टराईमाथि गरिएको दुव्यर्वहार भ्रष्टचार विरोधी अभियन्ता बताउने ज्ञानेन्द शाही नेतृत्वको समुहले गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री भट्टराईमाथि दुव्यर्वहार भएको विषयमा भिडियो राख्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले मन्त्रीलाई ‘रामधुलाई गरियो’ भनि बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मन्त्री योगेश भट्टराईले आज नेपालगन्ज एअरपोर्टमा १ घन्टा प्लेन कुराएपछि हामी नागरिकले रामधुलाई गरियो । विचरा मन्त्रीज्यू मुसो लुके जसरी लुक्नु भो । अब नागरिक सचेत भइसके । अरिङ्गालका दिन गन्ती सुरु ।’
दुव्र्यवहार अराजकको पराकाष्ठ
सामाजिक सञ्जालमा राखिएको भिडियोमा पनि मन्त्रीको ढिलो हुनुको कारणभन्दा अन्य कारण उल्लेख गर्दै गाली गरिएको छ । भिडियो प्रष्टै रुपमा मन्त्री भट्टराईमाथि राजनैतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही व्यवहार गरिएको देख्न सकिन्छ । पारस, पञ्चायती र बहुदलीय व्यवस्थाको विषय उठाउँदै अती अशभ्य खालको अराजक ढंगबाट गाली गरिएको छ ।
निश्चय नै मन्त्रीले ढिलाई गर्नु र उडानमा डिले गराउन राम्रो विषय होइन् तथापि विमानस्थल जस्तो ठाउँमा मन्त्रीले माफी माग्दै गर्दा मन्त्रीमाथि गरिएको गाली गलौज र असभ्य व्यवहार अराजकता बाहेक केहि होइन् । लोकतन्त्रको सौन्दर्य पक्ष भनेको प्रत्येक नागरिकले प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार पनि हो तर प्रश्न उठाउने नाममा अति अराजक र असभ्य शैली प्रस्तुत हुनु दुःखद र निन्दनीय काम हो ।
भदौ २९ गते, २०७६ - १७:३२ मा प्रकाशित